I-NAB Show New York: I-FOR-A yokugqamisa Okamuva Ekukhiqizeni Okubukhoma - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-NAB Khombisa iNew York: I-FOR-A yokugqamisa Okamuva Ekukhiqizeni Okubukhoma
I-NAB Khombisa iNew York: I-FOR-A yokugqamisa Okamuva Ekukhiqizeni Okubukhoma
ICypress, CA, Okthoba 8, 2019 - I-FOR-A izokhombisa ukugxila kwayo ekuhlanganisweni komkhiqizo okuphelele ngombukiso wohla lwabasayidi bezimpawu, abashumekeli / ama-decoders, abashintshi bokukhiqiza ividiyo, amaseva wevidiyo, nezinhlelo zehluzo endaweni yokuxhumana yenkampani e I-NAB Bonisa I-New York. OKWEI-® izokhonjiswa eBooth N530 ngesikhathi sombukiso oqala ngo-Okthoba 16-17 Javits Isikhungo eNew York City.
I-FOR-A's NAB New York booth lineup ifaka i-FA-9600 processor processor processor ehlukahlukene, i-IP-HE950 encoder / decoder, isishintshi se-HVS-490 HANABI, i-Envivo Replay ye-Various Systems ne-Envivo Replay yezemidlalo kanye nesixazululo somdlalo obukhoma. Ukudalwa kokuqukethwe kweClassX kanye nesixazululo sokudlala ihluzo, i-CG-ephathekayo i-generator yezinhlamvu, kanye ne-ODYSSEY Insight video server.
Ngaphandle kokubonakala kwayo kwe-NAB New York, i-FA-9600 iprosesa yezinhloso ezahlukahlukene Kuboniswa kweminye imicimbi ephezulu, kufaka phakathi umcimbi ka-Okthoba we-2019 wombhoxo womhlaba, imidlalo yehlobo ye-2020 Tokyo, nokuqala kwezinkundla ezintsha zebhola lezinyawo eYurophu. Iprosesa yesiteshi esisebenza ngambili ye-FOR-A FA-9600 ithola ukunakwa kusuka kubasakazi be-prime prime abafuna ikhwalithi ephezulu kakhulu, ubuchwepheshe bokuguqula isithombe kulezi izehlakalo ezihlonishwayo.
IP Fujitsu's IP-HE950 amayunithi wesikhathi sangempela i-H.265 / HEVC encoder / decoder isebenzisa amathuluzi wakamuva wokucindezela kanye nama-algorithms wokusebenza wesithombe ukunikela ukuthembeka kwevidiyo okusesikhathini esisezingeni eliphezulu. I-IP-HE950 isekela umnikelo wesikhathi sangempela we-4K, kanye ne-SD kanye HD. I-IP-HE950 isebenzisa ubuchwepheshe obusha beHHNNUMX / HEVC, obunganikeza isilinganiso sokucindezelwa amahlandla amabili ngaphezulu kobuchwepheshe be-H.265 / AVC. I-FOR-A isabalalisa ukushumeka okuphezulu kokusebenza kwe-Fujitsu kanye nama-decoders eNyakatho Melika, eYurophu, Middle East nase-Afrika, kanye nezindawo ezikhethiwe eLatin America.
I-compact HANABI HVS-490 ivula umnyango ekukhiqizeni okungabizi kakhulu kwe-4K. I-HDMI Ukuxhaswa kwesikhombisi se-2.0b kunikela ngokuphuma kwe-4K kwisibukeli esinemibono eminingi Ukunikeza ngezici ezikhethekile, kufaka phakathi ubuchwepheshe be-MELite ™, obudlulisa isishintshi se-2 M / Es ukunikela ngokusebenza kwe-6 M / E, iHVS-490 yenzelwe ukusetshenziswa kunoma iyiphi imvelo ebukhoma, kufaka phakathi amahlumela eselula, imicimbi, nemikhiqizo yangaphakathi yenkampani . Isishizi sinikeza abasebenzisi ngezinkumbulo zomcimbi nemisebenzi ye-macro, kanye nabavumelanisi befreyimu abahlanganisiwe nababukeli abaningi.
Sisanda kwethulwa eNAB 2019 ngo-Ephreli, AmaSistimu ahlukahlukene azokhombisa okusha I-Envivo Studio eNAB New York ababekhona. I-Envivo Studio uhlelo lonke lokukhiqiza okukhiqizwa bukhoma okubandakanya isidlali se-clip, namanje isitolo, ibhokisi lokudubula, isicishi bukhoma, isihluthulelo sangaphakathi, ithuluzi lokuhlaziya labaqeqeshiwe kanye namakhono anamandla kubandakanya ukulawulwa kwe-VDCP, okokufaka kwerekhodi le-24hr, kanye nokuhamba okuhamba kancane.
I-Envivo Replay inikezela ngesixazululo esiphelele esiphelele esifakwe kusibonakaliso esibonakalayo somsebenzisi esinamakhono wokuqopha we-iso-Channel amaningi aqhubekayo, ukugcinwa kwesiqeshana ngasikhathi sinye kwama-engeli amaningi wokubhinisa iziqeshana, uhlu lwadlalwayo lokubonisa okubabazekayo, amandla okwakhelwa ngaphakathi, ukushicilela okuqondile kumapulatifomu ezokuxhumana, nokusekelwa kwamakhamera wejubane eliphakeme kakhulu elihamba kancane. At I-NAB Bonisa INew York, zombili izinhlelo ze-Envivo zizokhonjiswa ngesikhombimsebenzisi sokulalelwayo seDante, ezinika amandla amasistimu ukusekela okungacindezelwanga, isiteshi esiningi, umsakazo we-latency yedijithali ephansi kunethiwekhi ejwayelekile ye-Ethernet. IStudio neReplay futhi ixhasa i-NDI (Inethiwekhi yedivayisi yokuxhumana), umthetho olandelwayo we-Video-Over-IP.
Idemo yesisombululo sakamuva seClassX se-2D / 3D isizukulwane sokwenza umlingiswa kanye nemifanekiso eshukumayo ebukhoma ne-software yokudlala ehlanganiswe ne-FOR-A switchers yevidiyo izoba se-FOR-A booth. Ihluzo leClassX's suite yezixazululo lithandwa ngamayunivesithi, izibonakaliso zedijithali, umcimbi obukhoma, kanye nezinhlelo zokusebenza zokukhiqiza zemidlalo. I-FOR-A iyisabalalisa esikhethekile seClassX eNyakatho, eMelika Ephakathi neseNingizimu Melika. Isivumelwano sihlinzeka abasakazi kanye nabakhiqizi bomcimbi obukhoma bekwazi ukudala nokudlala imidlalo ye-ClassX yangempela yokusakaza ehlanganiswe ne-FOR-A ama-switchers wevidiyo.
I-CG-ephathekayo ephathekayo nephansi yohlobo lwe-software ye-Brain sefe izokwethulwa okokuqala e-US ngesikhathi se-NAB New York. Iyunithi ihlinzeka ngemisebenzi ebanzi yombhalo nemisebenzi yesithombe, kufaka phakathi ukunqwabelana kombhalo ezimbili ezizimele, ukufakwa kwe-static ne-animation logo, ukunqunyelwa kwesibalo ngenani eliphakeme / phansi, kanye nokugcwalisa / ukuhlangana kukhiye ngevidiyo yangemuva ebukhoma noma ihluzo ezilayishiwe. Njengoba kunesici esicebile esibekwe endaweni engabizi ngamanani, le yunithi ilungele zonke izinhlobo zezicelo ze-CG.
Insight ye-ODYSSEY Production Server uhlelo lokudlala lwamasiteshi amaningi, olutholakala ngokuhlelwa kweziteshi ezimbili noma ezine. Ukunikeza ukuxhumeka kweWebhu ngokulawula kusuka kunoma iyiphi insiza enesiphequluli sewebhu (akukho kufakwa okudingekayo), iseva yevidiyo ihlinzeka ngohlobo olwahlukahlukene lwama-wrappers asekelwayo kanye nama-codecs ngokunikela ngemidiya kanye nokudlala ividiyo nevidiyo yokudlala emuva kokubambezeleka.
I-FOR-A, umkhiqizi womhlaba wonke ohola imboni, unikeza imikhiqizo eminingi yokusakaza nokukhiqiza ngokugxila kwezobuchwepheshe obunqenqemeni, kufaka phakathi: HD, Imikhiqizo ye-4K ne-IP. I-A-A iyaqhubeka inikeza ukulungiswa kwesikhathi esizayo, izindleko eziphumelelayo, izixazululo zobuchwepheshe eziphambili. Imikhiqizo ibandakanya: ama-switchers wevidiyo, ama-switch switching, ababukeli abaningi, ama-cameras aphezulu e-4K, ama-encoder / amakhodi we-IP, amaprosesa wesignali amaningi, 8K / 4K /HD test generators, umbala wokulungisa, ama-synchronizers ohlaka, imikhiqizo esekelwe efayeleni, ama-generator womlingisi, amaseva wevidiyo nokunye okuningi.
Ukuze uthole uhla olugcwele HD kanye ne-4K yokukhiqiza nokuxazulula izixazululo, kanye nemikhiqizo e-IP, vakashela iwebhusayithi yethu www.for-a.com.
I-FOR-A CORPORATION OF AMERICA, 11155 Knott Ave., Suite G&H, Cypress, CA 90630 Ucingo: 714-894-3311, Fax 714-894-5399 Web site: www.for-a.com
Okuthunyelwe kwakamuva nge-Pipeline Communications (bona konke)
I-ASG Yamukela Umshayeli Wezezimboni uSteve Omncane Ukuhola Ukusebenza Kwebhizinisi Kokuhlanganiswa Kwezinhlelo - Disemba 3, 2019
I-Draper Media Implements Remote Production Imvelo isebenzisa Izinsiza zakwaSony - Novemba 27, 2019
Emaphethelweni Okubukhali Wokusakaza Production - Frost Cutlery neBPswitch - Novemba 19, 2019
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza Ukubhalisa OKWE i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw ukukhiqiza bukhoma I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB eNew York NAB16 nabshow amaseva wevidiyo i-switcher yevidiyo	2019-10-09
Ngaphambilini: Ubuntu namaphrofayela: Eran Stern
Olandelayo: I-NAB NY 2019: I-TVU Networks 'Cloud-based TVU Talkshow ne-AI-based-TVU MediaMind Open Doors Yokukhiqizwa Okuningi Kwamavidiyo nokusebenzayo